पाल्पा, जेठ १७ गते ।
ऐतिहासिक पाल्पा दरबार सङ्ग्राहलय सञ्चालनमा आएको aछ । राणाकालमा वि.स. १९९० को दशकमा तत्कालित पाल्पा तैनाथवाला प्रताप शमशेरले पाल्पा दरबारको निर्माण गरेका थिए । त्यही दरबार द्वन्द्वकालमा २०६१ माघ १८ गते ध्वस्त भएको थियो । दरबारको पुरानै शैलीमा पुनर्निर्माण गरेपछि प्रदेश स्तरीय सङ्ग्राहलयको रुपमा विकास गर्ने गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
५ नं. प्रदेश सरकारको सङ्ग्राहलय बनाउने योजना अनुसार पाल्पा दरबारमा विभिन्न जातजाति समुदायको ऐतिहासिक वस्तु तथा कला संस्कृतिको प्रतिबिम्ब हुने गरी सङ्ग्राहलय स्थापना गरिएको प्रदेश सभासद् तुलाराम घर्तीमगरले बताउनुभयो । घर्तीले सङ्ग्राहलयलाई सबै समुदायको इतिहास र गौरव प्रतिबिम्बित हुने सुन्दर बनाउनुपर्ने उहाँले जोड दिनुभयो ।
सङ्ग्राहलय स्थापनाले यस क्षेत्रको पर्यटन विकासमा सहयोग पुग्ने तानसेन नगरपालिकाका प्रमूख अशोककुमार शाहीले बताउनुभयो । पाल्पा दरबारमा सङ्ग्राहलय सञ्चालनले पाल्पा र यस क्षेत्रको पर्यटकीय विकासमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने विश्वास ब्यक्त गर्नुभयो ।
सङ्ग्राहलयमा अहिलेसम्म मगर समुदायको ऐतिहासिक कला संस्कृति झल्कने कक्ष निर्माण गरिएको छ । यस्तै नेपाल–अङ्ग्रेज युद्धका बेला प्रयोग भएका ऐतिहासिक घरेलु सामग्री ठूलो कराही समेत छन् । यस्तै पाल्पा गौडाका बेलामा तैनाथवाला शासकहरूको तस्विर सहित परिचय पनि दरबारभित्र राखिएको छ । अझै यसलाई पश्चिम नेपालकै इतिहास झल्काउने सङ्ग्राहलयको रुपमा स्थापित गर्न काम भईरहेको सङ्ग्राहलयका उपप्रमूख चन्द्रबहादुर वलीले जानकारी दिनुभयो ।
तीन तला र चारैतर्फ घरिएको पाल्पा दरबारमा ४१ वटा ठूला कक्ष छन् । दरबार पुनर्निर्माण हुनुभन्दा अगाडि यहाँ सरकारी कार्यालय समेत सञ्चालनमा थिए । तर अहिले सङ्ग्राहलय बनेपछि लुम्विनी क्षेत्रमा भित्रिएका स्वदेशी र विदेशी पर्यटकलाई समेत पाल्पामा भित्र्याउन सहज हुने बुद्धिजीवि निर्मल श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँले सङ्ग्राहलय बनाउन ठूलो प्रयत्न गर्नुपरेको बताउँदै अब निरन्र सञ्चालन र नमूना बनाउन स्थानीय र प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
पाल्पा सङ्ग्राहलयभित्र प्रवेशका लागि स्वदेशी र विदेशीका लागि शुल्क समेत निर्धारण गरिएको छ । अहिले पाल्पामा घुम्न आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूमध्ये दैनिक पाँच सय भन्दा बढी पर्यटकले दरबार सङ्ग्राहलयको अवलोकन गरी फर्कने गरेका छन् ।
त्रिभुवन बहुमुखी क्याम्पस पाल्पाको क्यामपस प्रमुखको कार्यकक्षमा ३ दिन देखि ताला, अांशिक प्राध्यापक नियुक्तीमा प्रक्रिया मिचिएको आरोप